लघुकथा: चर्को एड्मिसन शुल्क::Hamrodamak.com
लघुकथा: चर्को एड्मिसन शुल्क
- | राजकुमार श्रेष्ठ, दोहा
बोर्डिङ स्कुलमा एड्मिसन गर्न आउने गार्जेन हरू धेरै थिए । ती मध्ये दोर्जेका बुबाले भन्दै थिए, ” पोहोर साल पनि मेरो छोराले दुई बिषय दाग लगाएर पास गर्यो । यसपाली पनि बल्ल बल्ल पास भयो । यत्रो महँगो पैसा तिरेर बर्षेनी नाम लेखाएर पढायो गुनायो पासै हुन गाह्रो । हैन हौ, किन बोर्डिङ पढाउनु त ? सरकारी स्कुलमा हाल्दिए भैगो नि ।” त्यो कुरा सुनेर शुभेच्छाको मामुले पनि कुरा थप्दै थिए, ” मेरा त झन दुइ जना पढ्ने छन् । एड्मिसन त छदैछ तर झन प्रत्येक महिना फी नतिरीकन हुँदै हुदैन । परिक्षा शुल्क त झन चार पल्ट अरे । के अर्थ भयो र ? पैसा चै खादेर टन्न झोला भरि ल्याएर तिर्दा पनि पुग्दैन ।” बरू तीन पल्ट सम्म मात्रै परिक्षा हुने भए त सरहरूले पनि पूरै किताब पढाउने समय निक्लिन्थ्यो र बिध्यार्थीले पनि किताबका सबै कुराहरू शिक्षा पाउथे । स्कुलले यस्तो के गर्या होला ?
लेखक: राजकुमार श्रेष्ठ
अरू गार्जेनले पनि आ – आफ्नो कुरा राख्दै थिए । “बोले धेर नबोले अबेर” भन्दै यता रामको आमाले पनि अफिसमै बोलिन् , “हाम्रा त झन् तीन तीन जना पढ्ने छ्न । पैसाको खै के कुरा गर्नु र ? मकै भुट्दा उठेको फूल भुइँमा झरेर गए सरि जान्छ । धेरै साल बितिसक्दा पनि बिध्यार्थीले एउटै पाठ भएको किताब पढिरहनु पर्छ । समय सापेक्ष पाठ्यक्रम र निर्धारित पाठहरू लामो समय सम्म परिवर्तन हुदैन ।
हैन कुन र कहाँको प्रकाशनले किताब छापेको हो ? किताब भित्र के – कस्ता पाठहरू पढाइन्छ ? स्कुललाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो नि । तर यस्तो कुरा थाहा हुन्न रहेछ है । यहाँ त नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा आँच आउने पाठहरू पढाइन्छ जुन बिध्यार्थीको कलिलो दिमागमा कालो छाप पर्छ । उसले जिन्दगीभर बिर्सन्दैन । कुनै कुनै स्कुलले त झन भारत तिर प्रकाशन भएको किताब मगाएर भारततिरै दिइने शिक्षा दिइदो रहेछ । उसले कुन दिमागले कहिले आफ्नो देशको बारेमा सोच्छ ? त्यसैले हाम्रो देश नेपालमा समय समयमा शिक्षा र पाठ्यक्रममा सुधार हुनु अत्यावश्यक छ । ” रामको आमाको यो कुरा सुनेर सबै जनाले हो त हो भन्दै सहि थप्दै थिए ।
अर्का एज जना गार्जेनले पनि चौरीमा बसेर अरू सग गफ गर्दै थिए । प्रत्येक साल कलेजमा आइ ए., बि ए., एम. ए. पास गरेर योग्य ब्यक्तिहरू खाली हात बसिरहेका हुन्छन् । स्कुलले बिज्ञापन निकालेर पनि के गर्ने र ? यहाँ आफ्नै मान्छे मात्रै सुटुक्क घुसाउछन । के अनि बिध्यार्थी, देश र समाजले चाहेको गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन, हैन ? हो नि बिचराहरू बेरोजगार भएर बसिरहेका हुन्छन् है ? राम्रो ठाउँमा राम्रोसँग काम गर्नु पाए ती मान्छेहरूले कति मजाले मन लाएर काम गर्थे होलान् है ? कसैले कुरा सुनेर हो भन्दै सहि थप्दै थिए ।
स्कुलले एक कक्षा देखि नै कम्प्युटर बिषय राख्छ । कितावमा फोटाहरू देखाएर घोकाइन्छ । तर खै ब्यवहारिक ज्ञान ? कम्प्युटर, ल्याब टप देख्नु पाउदैन । एड्मिसन चै हामी साधारण मान्छेको ढाड फुस्किने गरि महँगो न महँगो राखेको हुन्छ । अनि फेरि चर्को मासिक शुल्क ? हामी साधारण मान्छे, खेती किसानले कसरी थाम्नु ? देश र समाजको सबै क्षेत्रमा पर्ने भार जति कृषि क्षेत्रमा अरे ।
यता कोही मिसहरू मुखामुख गर्दै थिए भने कोही मेडम गार्जेनहरूलाई सम्झाउदै थिए, “स्कुलले अभिभावक बैठक भनेर बोलाको दिन बैठकमा आउनु पर्छ नि । तपाइहरू कसैलाई बजार नगइ नहुने, कसैलाई त्यही दिन खेतमा धानको बीउ राख्नुपर्ने, कसैलाई सस्था र अफिसको मिटिङ्गमा नगइ नहुने ? स्कुलले बोलाको मिटिङमा चै तपाइँहरू आउनु हुन्न । यदि आउनु भएमा पनि कसैले बोल्ने कुरा बोल्नु हुन्न । अनि अहिले चै किन ठूल्ठूला गर्नु हुन्छ नि ? यसरी कहाँ हुन्छ त हजुर ? खै तपाइँहरूले कुरा बुझेको ? हाम्रा पनि पढ्ने छोराछोरी छन आखिर लाग्ने रकम त लागिहाल्छ नि । “